Teip फिड - यो के हो? teip-टेप कसरी प्रयोग गर्ने
Teip फिड - यो के हो? यस ह्यान्डी उपकरण व्यापक, टिकाउ टास्ने प्लास्टर, समर्थन जोडों र मांसपेशीमा फिक्सिंग को लागि प्रयोग गरिन्छ जस्तो विशेष लोचदार कपडे देखि एक टेप छ।
को teip फीड के हो?
टेप प्रभावकारी जोखिम क्षेत्रमा चोट झुकाउ छन् कि समर्थन मुख्यतया प्रयोग गरिन्छ। व्यायाम समयमा लोचदार clans प्रयोग गंभीर तनाव पछि छिटो मांसपेशी रिकभरी बढवा दिन्छ। पुष्ट टेप केहि प्रकारको जब शरीर मा तरल पदार्थ को परिसंचरण सुधार, यो सम्भव दुखाइ हटाउन बनाउन, राम्ररी प्रयोग, सधैं केही अभ्यास गर्न सम्बन्धित।
पनि शरीर मा चिस्यान र पानी संग सम्पर्क मा जब टास्ने सम्पत्ति teip फीड खेल को उन्मूलनको संग रहनेछ। टेप सजिलै कैंची संग कटौती र पूर्ण विशेष गोंद सल्वैंट्स लागू गरेर व्यायाम पछि हटाइयो।
पुष्ट टेप टेप को आवेदन को सुविधाहरू
पुष्ट टेप को कम लोकप्रियता को लागि मुख्य कारण मध्ये एक हुँदा चोट गलत आवेदन एक उच्च सम्भावना छ। यसबाहेक, अनुचित प्रयोग पुष्ट प्रदर्शन मा एक कमी हुन सक्छ।
पटक को शरीर सयौं इच्छित भागहरु गर्न टेप सुरक्षित चोट को likelihood कम गर्छ। तथापि, teip तपाईं आफ्नो शरीर संग reinforcing टेप को प्रभावकारी आवेदन बुझ्न जो विशेषज्ञहरु संग परामर्श गर्न "मित्र बनाउन", साथै, यस शरीर विज्ञान बुझ्न कम्तिमा एक न्यूनतम स्तर आवश्यक टेप विभिन्न तरिकाहरू बारेमा जानकारी लाभ प्रयोग गर्न।
कसरी teip-टेप कारण व्यक्तिगत विकल्प परीक्षण र आफ्नो नियमित प्रयोग गर्न, प्रयोग गर्न, र आफ्नो मा हुन सक्छ बुझ्छु। तर, अनावश्यक समस्या जोगिन हामी अचाक्ली जटिल टेप गर्न Resort हुँदैन।
प्रकार टेप teip
सक्रिय मान्छे को बहुमत गर्न सबैभन्दा सुलभ inelastic teip टेप छ। यो के हो? यो embodiment प्याच एक शास्त्रीय प्रकार सम्बन्धित। सामान्यतया यस्तो बेल्ट प्रयोग बंधन र व्यक्तिगत मांसपेशीमा को एक सरल fixation सीमित छ। यसबाहेक, inelastic बेल्ट जो टेप अन्य प्रकार को क्रमिक आवेदन आवश्यक थप जटिल टेप, को लागि एक आधारको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
पुष्ट टेप को एक पेशेवर प्रकार को लागि लोचदार बैंड छन्। सुत्छन् यस्तो टेप को उत्कृष्ट क्षमता तपाईं सुरक्षित सही स्थिति मा हड्डी जोड्ने तन्तु समाधान गर्न र एकै समयमा आन्दोलन बाधा गर्दैन अनुमति दिन्छ। लचीलापन को उच्च स्तर एकदम क्षेत्र टेप वृद्धि र एकदम fixation बृद्धि गर्न खेलाडी सक्षम बनाउँछ।
सबैभन्दा नवीन, उच्च-प्रदर्शन खेल प्रकार टेप reinforcing छ kinesis teip टेप। के हो यो? Kinesis फीड उत्पादनहरु विशेष आकारको र शरीर को विशिष्ट भागहरु समाधान गर्न डिजाइन हो। हालै, टेप यस प्रकारको व्यापक रूपमा व्यावसायिक टेप को क्षेत्र मा कुनै पनि विशेष ज्ञान आवश्यक छैन खेलाडीहरूलाई द्वारा प्रयोग गरिएको छ।
आवेदन प्रविधी teip टेप
प्रभावकारी लोचदार बैंड प्रयोग टेप को प्रविधी प्रयोग गर्न, यो musculoskeletal सिस्टम को संरचना र कार्य बारे आधारभूत ज्ञान हासिल गर्न, शारीरिक रचना मूल कुराहरू सिक्न उचित छ। व्यावसायिक खेलाडीहरूलाई लागि जरूरी मांसपेशीमा र बंधन को विशेषज्ञ टेप मा प्रशिक्षण पारित गर्न छ।
हाल, पुष्ट टेप imposing को निम्न तरिकाहरू छन्:
मानक टेप - खेलाडीहरूलाई लागि teip फीड कस बन्डलहरूको मा superimposed, प्रासंगिक क्षेत्रमा वरिपरि र्याप वा आवश्यक क्षेत्रहरूमा टाँसियो।
संयुक्त टेप प्रविधी - पुष्ट टेप धेरै प्रकार, विशेष गुण संग प्रभावकारी सुरक्षा सिर्जना गर्न अनुमति जो प्रयोग समावेश छ। निर्धारण बाहिर, टेप आकार बुझ्न जो अनुभवी पेशेवरों द्वारा विशेष लगे छ सम्बन्ध गाँसिसकेको लागि ठाउँ छनौट र आवश्यक सञ्चालनका सटीक अनुक्रम थाहा छ।
कसरी तपाईं के चाहनुहुन्छ चयन गर्न?
मानक teip टेप, जो को मूल्य अहिले उपलब्ध छ बिल्कुल सबै खेलाडीहरूलाई, मात्र विशेषता खेल पसलहरुमा बेचिएको, तर सबै भन्दा फार्मेसियहरुमा। आवश्यकता इन्टरनेटमा सबैभन्दा किफायती भेटी फाइदा लिन सजिलो तरिका टेप जटिल प्रदर्शन गर्न बैंड को धेरै प्रकार खरिद गर्न जब।
विशिष्ट निर्माता छनौट अक्सर कुनै पनि टेप को आवेदन व्यक्तिगत अनुभव मा निर्भर गर्दछ। यो मुद्दा आधारित विशेषज्ञ राय रूपमा र सकारात्मक वा आफ्नै तीतो अनुभव हुन सक्छ। व्यक्तिगत विकल्प मार्फत जा रहेको छ, धेरै सजिलो एक भन्दा उपयुक्त निर्माता फेला पार्न। निस्सन्देह, सुरुमा राम्रो-ज्ञात पश्चिमी ब्रान्ड केन्द्रित।
पुष्ट टेप अभ्यास को प्रयोग
जिम मा हात मा लोड बेचैनी ल्याउन थाले मानौं। एकै समयमा व्यायाम बाइक वा मा ट्रेडमिल सक्रिय आन्दोलनहरु प्रदर्शन गर्न आवश्यकता रूपमा दुखाइ को अनुभूति कम छैन। यो यस्तो मामला मा, आवेदन एक इच्छित स्थिति मा मांसपेशिहरु र जोडहरुमा समाधान गर्न सक्षम छ जो teip-टेप, मदत गर्न सक्छ छ। तसर्थ, तपाईंलाई द्रुत दुखाइ को, कहिल्यै रोजगार ceasing छुटकारा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
उपयोगी पुष्ट टेप पनि जब प्ले असमान भूमि मा पतन एक फुटबल पाठ हुन सक्छन्। पनि व्यावसायिक क्षेत्रहरू pits र धक्का को एक ठूलो संख्या समावेश गर्दछ। र गर्दा असमान खुट्टा चलिरहेको पतन भने, यो अक्सर धेरै महिनाको लागि बिदा आफ्नो मनपर्ने खेल भन्न बनाउँछ। समस्या क्षेत्रमा टेप चोट को जोखिम कम र अतिरिक्त भरोसा प्रदान गर्दछ।
यसलाई यसरी हामी मांसपेशिहरु, जोडों र मेरुदण्ड मा आवश्यक लोड दिन सकिन्छ, क्रस-प्रशिक्षण बिना प्रकारका एक सेट कल्पना गर्न गाह्रो छ। जगिङ अघि टेप तयार musculoskeletal सिस्टम मा अत्यधिक भार देखि सुरक्षा दिन्छ। को clans संग एक पटक चलाउन भएको, धेरै मान्छे पहिले फिक्सिंग को लागि यस्तो विधि गर्न Resort छैन किन आश्चर्य।
पुष्ट टेप कसरी गोली?
को टाँसन वाला टेप निर्धारण कसरी हटाउन जान्न, एकदम केहि समय अभ्यास तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न। पुष्ट टेप हटाउँदै, विशेषज्ञहरु गोंद भंग गर्न कैंची प्रयोग, साथै विशेष तरल पदार्थ सुझाव दिन्छौं। , Hairs आफ्नो पीडादायी peelable बच्न clans निष्कासन यो दृष्टिकोण बेचैनी र अप्रिय परिणाम सुरक्षित।
पुष्ट टेप टेप प्रयोग को लाभ
खेल गतिविधिहरु मा मांसपेशिहरु र जोडहरुमा फिक्सिंग को लागि आवेदन clans pluses एक सम्पूर्ण धेरै छ। तिनीहरूलाई बीच, सबै को पहिले टिप्पण लायक छ:
मांसपेशी संकोचन को सुधार, मांसपेशी टोन, मोटर कार्य पत्र र आन्दोलन को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त;
, मांसपेशी थकान हटाउने मांसपेशी clamping भोल्टेज, आफ्नो अत्यधिक कमी को likelihood कम;
fixation पहिले नै क्षतिग्रस्त मांसपेशिहरु र जोडहरुमा, घाइते पछि पुनर्वास को वस्तुतः पीडारहित खण्डमा समयमा दुखाइ कमी;
, शरीर मा तरल पदार्थ को ठहराव रगत र लसीका को परिसंचरण सुधार उन्मूलन;
शरीर, inflammations, शरीर पुछ्ने देखि हानिकारक पदार्थ को सक्रिय हटाउने गर्मी को अनुभूति घट्यो;
गम्भीर व्यायाम स्वास्थ्य मा सामान्य सुधार।
Teip टेप - यो के हो? मुख्यतया खेल टेप उत्कृष्ट चयापचय र परिसंचरण सुधार, दुखाइ लागि उपाय मांसपेशी overvoltage सुरक्षा हो।
व्यवहार मा पुष्ट टेप को आवेदन मा धेरै अध्ययन र musculoskeletal सिस्टम को रोगहरु को रोकथाम लागि आवश्यकता पहिले व्यय चोट को प्रभाव समाप्त गर्न विशेष गरी जब आफ्नो उच्च दक्षता प्रमाणित। किन फिक्सिंग टेप अहिले लगभग सबै विषयों मा व्यावसायिक खेलाडीहरूलाई द्वारा व्यापक प्रयोग गरिन्छ छ।
झोला ग्रिज्ली - बच्चाहरु र किशोरों लागि गुणस्तर उत्पादनहरु
कलम र Pencils लागि अडान छनौट
एक नवजात लागि किनमेल सूची कस्तो हुनुपर्छ?
Multivarka मा बिस्कुट: केक आधारमा लागि नुस्खा
दबाइ 'bebikalm': प्रयोगको लागि निर्देशन
Misalliance - यो के हो?
चिकन जांघ: क्यालोरी सामग्री र आहार पोषणको अनुपालन। फ्राइड र स्टुडेड चिकन जांघहरू
वर कपडे: तिनीहरूले के हुन्?
माछा fillets। विभिन्न embodiments मा नुस्खा
ग्रीवा diathermy: प्रकृति र विधि को नतिजा
जीन उत्परिवर्तन संख्या मा परिवर्तन र क्रोमोजोममा को संरचना संग सम्बन्धित छन्